Shabeelaha dhexe: Carruur ka faa’ideysnaya waxbarasho bilaash ah iyo quudin - Radio Ergo
(ERGO) – Ku dhawaad laba kun oo carruur ah ayaa waxbarasho bilaash ah iyo quudin ka helaysa toban iskuul oo ku kala yaalla,degmooyinka Jowhar,Balcad,Cadalle iyo Warsheekh oo ka wada tirsan gobalka Sh/dhexe.
Mashruucan oo socon doono muddo hal sano ah, ayaa u jeededu tahay in la gaaro 10 kun oo carruur ah, inay helaan waxbarasho bilaash ah iyo quudin, sida uu radio Ergo u sheegay Maxamed Yuusuf oo ah kormeeraha guud ee wasaaradda waxbarashada gobolka Shableelaha dhexe.
Carruurta waxbarashada helay waxaa ka mid ah Faadumo Muuse Cabdullaahi oo 17 jir ah, dhigatana fasalka afaraad ee iskuulka hoose ee Moyko oo ku yaalla tuulada Moyko oo Jowhar u jirta 2 KM dhank bari.
Waxay ka heshaa iskuulka quraac, qado iyo waxbarasho bilaash ah, maadaama ay ka soo jeedo qoys beeralay ah oo fatahaadda webiga Shabeelle ay dalaggi ka baabi’isay. Faadumo oo wayn 7 carruur ah oo la dhalatay ayaa kaligeed k aaadda iskuulka.
“Markii hore cows ayaan guri jiray hadda waxbarasho ayaan u soo jeestay niyadeeyda saafi waaye galabahii hooyadeey ayaan cowska la guri jiray oo soddon aan aniga shaqeeyo iyo labaatan hooyaday ay shaqayso ayaan ku biili jirnay qoyskeenna madaama aabbahay wax shaqo uusan ahayn, subaxii qado iyo quraac ayaa iskuulka ka helaa.”
Faadumo ayaa sheegtay inaay waxbrashada sii wada doonto oo aysan guursanayn, mustaqbalka ayay rajaynaysaa inay noqto macallamad.
Fatahaadda webiga oo soo noqnoqtay ayaa saamayn nolasha qoysas badan oo beeralay ahaa, kuwaas oo dhaqaalihi ka soo gali jiray dalagyada ay goostaan meesha ay ka baxday.
Mashriican oo lagu caawinayo qoysaska danyarta ah iyo kuwa fatahaadu saamayeen, ayaa waxaa iska kaashanaya wasaaradda waxabarashada Hirshabeelle iyo hay’dda Global partner education.
Idiris Cabdulle oo degan tuulada moyko ayaa ka mid ah waalidiinta ay carruurtooda ka faa’iideysanayaan waxbarashada bilaashka iyo quudinta.
“Waxaa ii dhigta wiil iyo gabar fasalada afraad iyo sedexaad, waxay helaan qado iyo quraac waana dhiirigalin ay wasaaradda nasiisay, afar musqulood ayuu leeyahay iskuulka oo gabdhaha iyo wiilasha ay kala leeyihiin”.
Sidoo kale idiris ayaa laba wiil oo carruurtiisa u waaweyn u diray magaalada muqdisho si xirfadda farsamada gacanta ay u bartaan uguna shaqeeyataan mustaqbalka. Iskuulladan ayaa ah kuwa hoose oo kaliya.
Dugsi ku yaallo tuulada Gaafaay oo jowhar u jirta 7 km dhanka bari ayaa ka mid ah meelaha laga hirgaliyay, waxaana hadda dhigta boqol iyo lix arday oo 52 ay yihiin gabdho sida uu sheegay Siidoow Xaaji Yarrow oo ah maamulaha iskuulka.
“Waxay dhigtaan xilliyada galbahii ah, subaxiina qur’aanka ayay bartaan waxaana la siiyay carruurta buugaag yaryar oo sheekooyin ah, kuraasta iyo miisasna waana nala siiyay carruur badan oo dugsiga ka tagtay dib ayey ugu soo laabteen markay arkeen quudinta”.
Iskuulkasta ee ka mid ah tobanka iskuul waxaa ka howl gala 5 macallin, maamule iyo sadex haween ah oo raashiinka kariya oo dhammaantood wada mushaari ah.
Gedo: Beeraley joojiyay tacbashada beeraha markii fatahaad iyo ayax ay saameeyeen